मेथी खादा दर्जन भन्दा धेरैं रोगबाट बच्न सकिन्छ ! खाने (तरिकासहित हेर्नुहोस) | Suvadin !
Feb 01, 2019 07:59
काठमाडौं,१८ माघ -अहिले तरकारी बजार हरियो सागसब्जीले भरिएको छ। रायोदेखि चम्सुर, पालुङ्गो लगायतका अनेकौ साग अहिले बजारभरी देख्न पाइन्छ। यस्ता सागसब्जी जति स्वादिलो हुन्छ, यसमा रहेको पौष्टिक तत्वले शरीरलाई त्यति नै पोषण प्रदान गर्छ । आज हामी चर्चा गर्दैछौं मेथीको सागको बारेमा, आउँनुहोस् जानौं यसका केही चमत्कारीक लाभका बारेमा….
मेथीको साग खानाले जोर्नीको दुखाईसमेत कम हुन्छ। मेथीको साग तथा भिजाएको मेथीलाई तारेर खाने गर्नुपर्दछ।
पेटमा जुका वा किरा परेमा पनि मेथीको सेवन प्रभावकारी मानिन्छ। मेथीको पत्तिलाई पिसेर त्यसबाट निकालिएको रसलाई प्रत्येक दिन सेवन गरेमा पेटको किराको समस्या कम हुने गर्छ।
मेथीले चिसो लाग्नबाट शरिरलाई जोगाउँछ । प्रत्येक दिन यसलाई कुनै न कुनै विधिबाट सेवन गर्नाले चिसो लाग्दैन।
मधुमेहका बिरामीले प्रत्येक दिन मेथीको पत्ताको रस निकालेर पिएर यसले रगतमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ।
अनुहारमा मेथीलाई पिसेर लगाउनाले अनुहार चमकदार र कसिलो हुन्छ। साथै, यसले छाला नरम बनाउने हुँदा सुख्खा छाला भएका व्यक्तिहरुका लागि पनि मेथी निकै उपयोगी हुन्छ।
मेथीको पत्तामा प्याज हालेर खाएमा उच्च रक्तचापको समस्या कम हुने गर्छ भने न्यून रक्तचाप भएका व्यक्तिका लागि मेथी मिसाइएको तरकारी निकै लाभदायक हुन्छ।
नियमित रुपमा मेथीको सेवनले मुटुसम्बन्धी समस्या कम गर्न मद्दत गर्छ। यसले हृदयघातको सम्भावनालाई न्यून बनाई शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ।
लगातार रुपमा मेथीको सेवनले तौल नियन्त्रित गर्न समेत मद्दत गर्छ। शरीरमा जमेको बोसो क्रमिक रुपमा कम हुँदै जान्छ।
बारम्बार पिसाब लागेमा मेथीको पत्ताको रसलाई नियमित रुपमा सेवन गरेमा यो समस्या तुरुन्तै खत्तम हुन्छ। एजेन्सी